उत्पादकता: "फास्ट, सस्तो, राम्रो" रुब्रिक | Martech Zone
उत्पादकता: "फास्ट, सस्तो, राम्रो" रुब्रिक
शनिबार, मे 29, 2010 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 रबी स्लटर
जबसम्म त्यहाँ परियोजना प्रबन्धकहरू छन्, कुनै पनि प्रोजेक्ट वर्णन गर्नका लागि द्रुत र फोहोर चाल भएको छ। यसलाई "फास्ट-सस्तो-गुड" नियम भनिन्छ, र यसले तपाइँलाई बुझ्न को लागी पाँच सेकेन्ड लिन्छ।
यहाँ नियम छ:
छिटो, सस्तो वा राम्रो: कुनै पनि दुई छान्नुहोस्।
यस नियमको उद्देश्य हामीलाई याद दिलाउनु हो कि सबै जटिल प्रयासहरूको आवश्यक पर्दछ ट्रेडअफ्स। जब हामी एक क्षेत्रमा लाभ छ त्यहाँ पक्कै अरु कहीं घाटा हुनेछ। त्यसो भए मार्टेकका पाठकहरूको लागि छिटो सस्तो-राम्रो मतलब के हो? हामी सँगै जाऔं सबै कुरा।
फास्ट, सस्तो र राम्रो को अर्थ
हामी सबैको वेगको भावना छ। यो दौड सप्ताहन्त यहाँ इंडियानापोलिसमा छ, र सब भन्दा छिटो कार जित्छ। तपाईले कुन प्रोजेक्ट पूरा गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छैन, चाहे त्यो घाँस काट्दैछ वा चन्द्रमाको यात्रा गरिरहेको छ, हामी सबै चाहन्छौं कि यो सकेसम्म छिटो सकियोस्। अवश्य पनि कहिलेकाँही गति सबै कुरा हुँदैन। केहि सब भन्दा राम्रो बिदा ती हुन् जहाँ हामी ढिलाइ गर्दछौं। केहि सब भन्दा सफल उत्पादनहरू ती हुन् जहाँ डिजाइनरहरू पहिले बजारमा जानको निम्ति तर राम्रो काम गरेर चिन्ता गर्दैनन्। र प्राय: हडबड गर्नु संसाधनहरूको बेकार हो। सबै पछि, इन्डी कारहरू मात्र पाउँछन् १.1.8 MPG.
र निश्चित छ, यो पैसा बचत गर्न को लागी महान छ। तपाईं स्वयंसेवकहरू र इंटर्नर्सको फौजलाई केही उत्पादन गर्न को लागी बोलाउन सक्नुहुन्छ, र अक्सर आश्चर्यजनक परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अझै लागत घटाएर हामी बलिदानको गुणस्तर पनि जोखिममा लिन्छौं। ती सबै ठाउँहरू खोज्नको लागि बचत गर्न समय लिन्छ। अन्तमा, उत्तम संभव परिणामको तरिका भनेको समय र पैसा कुनै वस्तु नहुनु सुनिश्चित गर्नु हो। उच्च गुणवत्ताको काम सँधै उपलब्ध हुन्छ जब हामीसँग हाम्रो असीमित स्रोतहरू छन्।
छिटो, सस्तो, राम्रो र उत्पादकता
औंठाको यो नियम कहिलेकाँही अलि स्पष्ट देखिन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ कुनै पनि परियोजनामा ​​ट्रेड अफ्स छन्। अझै, जस्तो डग कर भर्खरै औंल्याए, परियोजना अनुमान पीडादायी छ। त्यो किनभने ग्राहकहरूले निरन्तर हामीलाई केहि डेलिभर गर्ने प्रयासको जालमा हाल्छन् जुन छिटो, सस्तो र सबै एकै समयमा राम्रो हुन्छ।
यो असम्भव छ। यो कारण यो छ कि समयसीमा स्लिप हुन्छ, परियोजनाहरू बजेट भन्दा माथि जान्छन् र गुणस्तर ग्रस्त हुन्छन्। तपाईंले ट्रेडअफ बनाउनु पर्छ।
परियोजनाको आकारको फरक पार्दैन, द्रुत सस्तो-नियम मूल्यवान छ। यदि तपाईं फोटोशपमा काम गरिरहनु भएको ग्राफिक डिजाइनर हुनुहुन्छ भने तपाईका तहहरूलाई छुट्याएर र संगठित नगरीकन समय बचत गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं आफ्नो ईमेल मार्केटिंगमा लागत कटौती गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं यो गुण घरमा राखेर नै त्याग गर्न सक्नुहुन्छ (वा आउटसोर्स ईमेल मार्केटि provider प्रदायकको प्रयोग द्वारा तत्कालको बलिदान।) यदि तपाईं आफ्नो लेखमा केही टाइपहरू आपत्ति मान्नुहुन्न भने, तपाईले अधिक चाँडो र सस्तो उत्पादन गरेर लाभ उठाउनुहुनेछ। ट्रेडअफहरू हेर्न सजिलो हुन्छ।
तपाईको आफ्नै अफिसमा तपाईले निर्णय लिन भन्दा बढि चाँडो सस्तो राम्रो नियम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यसलाई सरोकारवालाहरुका बीचमा सञ्चार गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जब मानिसहरूले काम गर्नलाई सोध्छन् तुरुन्तै, तपाईले उनीहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरूले गुणवत्तालाई बलिदान दिन रुचाउँछन् वा बढि लागतको लागि भुक्तान गर्न सक्छन्। यदि कोही कम महँगो विकल्पहरूको बारेमा जान्न चाहन्छ भने, उनीहरूलाई सोध्नुहोस् कि उनीहरूले विकल्पहरू देख्दछन् जुन बचतहरूलाई कम सुविधाहरूमा वा लामो विकास चक्रमा जडान गर्दछ।
तपाईं विचार प्राप्त। फास्ट-सस्तो-राम्रो प्रयोग गर्नुहोस्! यो परियोजना प्रबन्धन, उत्पादकता र सरोकारवाला अन्तर्क्रियाको प्रकृति बुझ्ने एक शक्तिशाली तरीका हो।
टैग: सस्तोछिटोछिटो सस्तो राम्रोराम्रोमूल्यमूल्य गति गुणवत्ताउत्पादकतागुणस्तररुब्रिकगति
तपाईंको अर्को वेब प्रोजेक्ट कसरी अनुमान गर्ने
WordPress: भविष्यका पोस्टहरू आगामी घटनाहरूको रूपमा प्रकाशित गर्नुहोस्